Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Sweden oo Shirkoodii Caadiga Ahaa Iskugu Timid.
Jaaliyada Sweden oo Shirkoodii Caadiga Ahaa Iskugu Timid.
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 6/12/2015 shirkoodii sadex biloodlaha ahaa iskugu yimid Jaaliyada Somalida Ogadenya ee ku dhaqan magaalo madaxda dalka Sweden ee Stockholm.
Shirkan oo ahaa mid si heer sare ah loosoo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay shacab fara badan oo kamid ah Jaaliyada Stockholm. Waxaa kaloo goob joog ka ahaa kulankan qaar kamid ah Madaxda & Masuuliinta Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO).
Gudoomiyaha Jaaliyada & Masuuliin kale ayaa munaasabadan kasoo jeediyay khudbado & warbixino dhaxalgal ah oo kusaabsan waxqabadka & hawlaha Jaaliyada. Sidoo kale waxaa madasha shirkan laga soo jeediyay warbixino kala duwan oo kusaabsan guud ahaan xaalada Halganka Somalida Ogadenya.
Dhinaca kale waxaa madasha shirku kasocday lagu gudoonsiiyay xubno kamid ah hawlwadenada kala duwan ee Jaaliyada Sweden abaal marino ay ku mutaysteen wax qabadkooda & dadaalka ay xubnahaasi muujiyeen mudadii lasoo dhaafay. Shirkan ayaa kusoo idlaaday jawi aag u wanaagsan ooy aad ugu diirsadeen kasoo qaybgale yaashii shirka.